के पावर फैक्टर सेभर काम गर्दछ? ग्राहक समीक्षा (2019)
पावर फैक्टर सेवर समीक्षा 2019
ती मध्ये एक पावर फ्याक्टर सेभर बक्स किन्नु हो। यस विधिले उर्जा पूर्णतया मद्दत पुर्‍याउँछ, वायरिंग हर्नेसको अत्यधिक ताप रोक्न र उपकरणको जीवन लाई बढाउन।
मूल बक्स, जुन आउटलेटमा प्लग गरिएको छ, त्यसले तपाईंको अपार्टमेन्टको भित्रीलाई क्षति पुर्‍याउँदैन। यो तपाईंको घरमा कुनै पनि आउटलेटमा समावेश गर्न सकिन्छ। तपाईसँग यसका लागि पेशेवर सीप हुन आवश्यक छैन। यो उपकरण पूर्ण सुरक्षित छ। थप रूपमा, यसले तारमा सर्ट सर्किट रक्षा गर्दछ।
पावर फैक्टर सेवरले तपाईंको लगभग आधा इलेक्ट्रिक बिल घटाउँछ। तपाईं तपाईंको बिलमा तीस प्रतिशतले तपाईंको पैसा बजेट गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, यस उपकरणले कम्प्युटर, ओभन, इलेक्ट्रिक केटलहरू र बिजुलीमा चल्दै गरेको अन्य उपकरणहरूको जीवन विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। एक मूल पावर फैक्टर सेभरले लगभग आधाले बिजुली बिल घटाउन सम्भव बनाउँदछ। न्यूनतम बचत तीस प्रतिशत हो। थप रूपमा, यसले कम्प्युटर, इलेक्ट्रिक ओभन, इलेक्ट्रिक केटलहरू र अन्य विद्युतीय उपकरणहरूको जीवन विस्तार गर्दछ।
अब म तपाईंलाई यो कसरी काम गर्दछ भन्ने कुराको साथ कामको सिद्धान्त र यसको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने सम्भावना बताउँछु। हो, भौतिक विज्ञान मा यो ज्ञात छ कि उपयोगी ऊर्जा मात्र एक स्थिर विद्युत प्रवाह प्रदान गर्दछ। यद्यपि वास्तवमा तपाईको घरका सबै उपकरणहरूले यसबाट कार्य गर्दछ।
अर्को क्युरन्ट कम्पोनेन्ट प्रतिक्रियाशील उर्जा हो, जुन व्यावहारिक रूपले बेकार हो। यो देखा पर्दछ जब ind indanceance र कप्यासिटर दुबै नेटवर्कमा एकै समयमा सञ्चालन गर्दछ। र यो अवस्था लगभग सबै तारमा हुन्छ। उदाहरण को लागी, टेलिभिजनमा अन्य उपकरणहरूमा जस्तै ind indanceance र कपिसिटर छ।
नेटवर्कमा प्रतिक्रियाशील पावर कम्पोनेन्टको अलावा, भोल्टेज भिन्नताहरू पनि प्राय: हुन्छन् विभिन्न उपकरणहरूबाट प्रयोग गर्दा, तारमा स्पार्कि sp सम्भव छ, बिजुलीको प्रहार पनि। नेटवर्कमा यी स्विings्ग धेरै ऊर्जा प्रयोग। यसबाहेक, तिनीहरू प्राय: बिजुली उपकरणहरूको कार्यमा प्रभाव पार्दछ, ओभर तापीकरण तारिखत गर्न नेतृत्व, आदि।
पावर फैक्टर सेभर बक्सले तपाईंको घरलाई नेटवर्कमा भोल्टेज भिन्नताबाट मात्र बचाउँदछ, तर यसले वायरि inमा हुने आधा बिजुली गुमाउन पनि रोक्दछ। यसले क्षतिपूर्ति दिन्छ (अवशोषित गर्दछ वा रिलिज गर्दछ) रिटिज्ट वर्तमान कम्पोनेन्ट जसले सबै उपकरणहरूको अपरेशनलाई नियमन गर्दछ। यसले वायरिंगमा विद्युतीय माग घटाउन मद्दत गर्दछ र तारहरू कम तातो हुनेछन्।
कसरी पावर फैक्टर सेभर प्रयोगको नतीजा हेर्न?
उपकरणको प्रभावकारिता अलि प्रयोग गरेर बाहिर देख्न सकिन्छ। यो इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरले गर्नु राम्रो हुन्छ। विशेष क्ल्याम्प प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तपाईंको घरमा उर्जा खपतको वास्तविक मापन गर्नुहोस्।
मापन विद्युतीय प्रवाहको विद्युतीय कोणमा गरिन्छ। पहिले, उपकरण बिना बिजुलीको लागत हेर्नुहोस्। त्यसपछि उपकरणलाई पावर आउटलेटमा प्लग गर्नुहोस् र भिन्नता गणना गर्नुहोस्।
हो, यदि यो परीक्षण छोटो समयमा मात्र गरियो भने वास्तविक बचतहरू देख्न गाह्रो छ। एक महिना भित्र मापन राख्नुहोस् र तपाईं वास्तविक बचत पाउनुहुनेछ। केही महिना सम्म पनि, तपाइँको खरीद लाभदायक हुनेछ।
कहाँ र कसरी पावर फ्याक्टर सेभर खरीद गर्ने?
तपाईं पावर फ्याक्टर सेभर खरीद गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन स्टोरमा वा तल डायल ब्याक फारम मार्फत:
निर्माताको वेबसाइटमा खरीद गर्दा धेरै फाइदाहरू हुनेछन्:
यो अक्सर छुट, आयोजित शेयर प्रदान गर्दछ;
निर्माता देश भर मा छिटो वितरण को ग्यारेन्टी;
तपाईं उपकरण वारंटी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - 24 महिना;
तपाईं रसिद मा मात्र सामानको लागि भुक्तान;
यदि तपाईंलाई सामानहरू मनपर्दैन भने, तपाईंलाई पैसा फिर्ता दिइनेछ;
केवल उत्पादन पृष्ठमा फारम भर्नुहोस् र अपरेटरको कलको लागि पर्खनुहोस्!
पावर फैक्टर सेवरको बारेमा टिप्पणीहरू।
अधिक र अधिक मानिसहरू ऊर्जा लागत बचत गर्न यो उपकरण खरीद गर्न इच्छुक छन्। र यस उपकरणको बारेमा केवल सकारात्मक समीक्षाहरू छन्। यो हो कि उपकरण धारकहरु को बारे मा कुरा:
पावर फैक्टर सेभर प्रयोग गर्दा तपाईले बिलहरूको चिन्ता लिनुहुन्न, कुनै पनि केसमा बिल आधा घटाइनेछ, यसबिना भन्दा। तपाईं एकै समयमा धेरै उपकरणहरू चालू गर्न सक्नुहुनेछ, प्लगहरू र तारहरू पग्लिने छैन।
हामीले ekonor उपकरणको परीक्षण गर्‍यौं र अधिग्रहित बिजुली बचतको नतीजाको रूपमा ऊर्जा खपतमा वास्तविक कटौती भएको महसुस गर्यौं। यो उपकरण प्रयोग गरीरहेको एक बर्ष भन्दा बढीको लागि, यसका फाइदाहरूको बारेमा मसँग कुनै डाउट छैन। अब हामी नेटवर्कमा भोल्टेज परिवर्तनको सेवाक्षमताका बारे चिन्ता गर्दैनौं किनभने यो अब हुने छैन!
जब तपाईं पावर फ्याक्टर सेभर खरीद गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहोस् कि तपाईं सरकार वा बिजुली आपूर्तिकर्तालाई धोका दिनुहुन्न। यस उपकरणको प्रयोग कानूनी छ, कानून संग कुनै समस्या छैन। तपाइँले देशमा आधिकारिक प्रतिनिधिबाट कागजातहरूको पूर्ण सेट प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस उपकरणको प्रभावकारिता धेरै रूसी मानिस र विदेशी अध्ययनहरु द्वारा प्रमाणित हुन्छ। बिजुली बचत बक्स किन्नुहोस्, तपाईले थोरै मात्र भुक्तान गर्नुहुने छैन, तर तपाईका उपकरणहरूको जीवन विस्तार पनि गर्नुहुन्छ।
"पावर फैक्टर सेभर समीक्षा २०१ review" मा एक टिप्पणी
डिसेम्बर 4, 20199मा: 16 बजे
सुपर vynález, Který se Prodává na čínských stránkách cca 160, -kč / ks, je to opravdu सुपर Německý एक nebo अमेरिक vynález ????? Nabízená krabička za cca 800, -kč je idetická s krabičkou za 160, -kč.Je to Buhapustý podvod na lidi na kterých vydělává nehorázné Peníze par lumpů !!!!!!!